Maalinta: 30-ka July, 2019
Wasaaradda Gaadiidka Ankara BB waxay heshay '226 Million TL' Metro Money '
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara, iyada oo lagu saleynayo isbedelka sharciga bixinta kharashka dhismaha dhulka hoostiisa, ayaa ku dhawaaqday in wasaaraddu ay bixin doonto 2019 milyan ginni sanadkii 226. Haddii howshii hore ay sii ahaato mid sii shaqeyneysa, degmadu waxay bixin laheyd ku dhowaad 35 milyan. [More ...]
Gabagabada Shaqooyinka Dekadaha Kala Duwan ee Dekadda Izmir
Soo gabagabeyntu waxay ka shaqeysaa qeybo kala duwan oo ka mid ah Dekadaha İzmir qeybaha kala duwan iyo qeybo ka mid ah. [More ...]
Xiriir toos ah oo ka socda Shiinaha ilaa London
Wasiirka Turhan, Connection DP World Yarımca Harbor Railway at khudbaddii furitaanka ee xaflada, xuduudaha, hareereysan badan waxay badda ka marriin boqolkiiba 70 saddex qaaradood ee ku yaal dalka Turkiga, ee Strait of Gibraltar iyo Badweynta Atlaantik, Suez [More ...]
Xalka smart ee isu dheellitirka xaaladda ee Kahramankart
Adeegyada gaadiidka dadweynaha ee Dawladda Hoose ee Dawladda Hoose ee Magaaladda Kahramanmaraş, waxay si dhaw ula socotaa horumarada tikniyoolajiyadda ah ee xawliga ku socda ee ku wajahan baaxadda gaadiidka 'Smart Transportation', gaadiidleyda gaadiidka dadweynaha si loo fududeeyo helitaanka tigidhada muwaadiniinta si ay ula xiriiraan Kaarka La-Xiriirka, [More ...]
Muddada Dib U Soocelinta Khadka Tooska ah ee Kaadhka Denizli ayaa Bilaabantay
gaadiidka dadweynaha in ay ogaadaan mashruuca noqon doontaa tusaale lagu Turkey degmada Denizli, muwaadiniinta keenay xog cusub. Codsiga cusub, "Denizli Karts" oo loo isticmaalo gaadiidka dadweynaha magaalada [More ...]
Muwaadiniinta Magaalada Ordu waxay ka digayaan shilalka Gaadiidka
Digniin la xiriira korodhka shilalka baabuurta maalmihii ugu dambeeyay, Waaxda Ciidanka Dab-demiska ee Waaxda Magaalo Dabka ayaa uga diga muwaadiniinta iyo darawalada inay u hoggaansamaan qawaaniinta taraafikada. MAR KASOO DALBAN SHURUUDAHA SHAQADA! [More ...]
Shaqada Asphalt ee Ceyhan ee Wadada 20
Waaxda Adult Metropolitan waaxda Qeybta Sayniska ee kooxaha Laamaha Wadooyinka, Degmada Ceyhan Inonu Boulevard waxay damacsan tahay shaqo bilaabin. Dhagxaanta dhagax-tuurka inta lagu gudajiray shaqada wadada waxaa loo beddelayaa adeeg. Ceyhan [More ...]
Melbourne Tram wuxuu ka shaqeeyaa Solar Power
Melbourne, oo ah caasimada gobolka Victoria, oo hadafkeedu yahay in la kordhiyo bartilmaameedka tamarta la cusboonaysiin karo boqolkiiba 50, waxay ku shaqeysaa shabakad dhan ee taraamyada magaalada oo leh tamarta qoraxda. Melbourne waa magaalada labaad ee ugu weyn Australia. [More ...]
Gaadiidka Kayseri ayaa Badbaadiyey 1 Milyan 121 Kun 920 Lira Oo Soo Saara Gudaha
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç, usbuuca cusub wuxuu ku bilaabmay booqashada cutubyada la xiriira gaadiidka. Duqa magaalada Büyükkılıç, oo warbixin ka bixiyay oo u kuurgalay daraasadaha, ayaa siiyay dadka Kayseri khibrad aad u fiican. [More ...]
Terminalka Baska ee Varsak wuxuu qaadi doonaa Rakaabka bisha Agoosto
Dawladda Hoose ee Magaalada Antalya, 3. Nidaamka Tareenka ee Marxaladda Varsak-Otogar Line ee tijaabinta khariidadaha bacda ciidda ayaa bilaabmay. Dhamaadka tijaabooyinka amniga, waxaa la qorsheynayaa in lagu bilaabo duullimaadyada rakaabka ee khadka Varsak-Otogar. Horaa loo furay ka hor dhammaystirka imtixaannada [More ...]
Dayactirka Wadooyinka Kooxda Kaş
Dowladda Hoose ee Antalya waxay wadaysaa dayactir iyo dayactir wadooyin xumaaday jiilaalka. Sütleğen, Yuvacık, Yayla Çavdvr, Yayla Bonito iyo wadooyinka kooxda Çamköy waxay ku xiran yihiin Kaş. Degmooyinka Waaweyn [More ...]
Shirkadda DP World waxay ku xiran tahay Shiinaha Shiinaha 'Yarımca Railway'
Dekadda DP World Yarımca Port ee ku taal Körfez Yarımca waxaa ku xirnaa Shiinaha iyada oo loo marayo tareenka iyadoo ay ka qeyb galayaan Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan DP World Yarımca Port, kaasoo shaqeynayay ilaa 2015 ee Gacanka, [More ...]
Ekrem Imamoglu, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, ayaa booqday Kabatas-Mecidiyekoy-Mahmutbey Metro maanta. Marka loo eego baaxadda safarka, İmamo madelu wuxuu indha indheyn ku sameeyay dayactirka iyo taliska qaybta tareenka dhulka hoostiisa socda. İmamoğlu wuu shaqeeyaa [More ...]
Cmamoğlu: 'Mecidiyeköy Mahmutbey Subway wuxuu Noqon Doonaa Mid Ka Mida Wadooyinka Ugu mashquulka badan Istanbul'
Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu wuxuu gashaday koofiyad magaceeduna saaran yahay, wuxuu gashaday jaakad wuxuuna kormeeray goobta dhismaha metro ee Kabataş-Mahmutbey. Isaga oo ka jawaabaya su'aalaha suxufiyiinta albaabka laga soo galo tareenka, İmamoğlu wuxuu yidhi, “Istanbul aad bay ugu baahan tahay metroga. [More ...]